१२ बर्षपछि कांग्रेसमा खुमबहादुर खड्काको खोलो फर्कियो – YesKathmandu.com
१२ बर्षपछि कांग्रेसमा खुमबहादुर खड्काको खोलो फर्कियो
शुक्रबार २८, फागुन २०७२
गिरिजा बाबुले २ करोड मागेपछि मलाई पसिना छुट्यो
‘खुमबहादुरजी पार्टी सञ्चालनका लागि रकम जुटाउनु पर्ने भयो, एक हप्ताभित्र २ करोड जुटाउने जिम्मा तपाईलाई छ’ खुमबहादुर खड्का पहिलो पटक यातायातमन्त्री हुँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने ‘कम्तिमा २० करोड आवश्यक छ, तपाईले २ करोड जुटाउनुहोला ।’
बाह्यपार्टी भन्दा आन्तरिक पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा निकै पेचिलो बनिरहेका बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २ करोड मागेपछि खड्का तनावमा परे । ‘त्यो बेला २ करोड कहाँबाट ल्याउने मलाई चिट चिट पसिना आयो’ खड्काले भने ‘मैले तत्कालिन सचिवलाई २ करोड ऋण खोज्न आग्रह गरेँ । उनले तीन दिनपछि २ करोड रकम ल्याएर दिए । मैले गिरिजाबाबुलाई दिएँ ।’ २ करोड सचिवलाई फिर्ता गर्नु पनि परेन ।
तत्कालिन नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईभन्दा शक्तिशाली बन्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको पार्टी आफ्नो कब्जा गर्ने रणनीति लिएका थिए । आफ्नो रणनीति पुरा गर्न कोइरालाले रकम जम्मा गर्दै थिए । कोइरालालाई पार्टी कब्जा गर्न २ करोड सहयोग गर्ने खड्का पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाटै प्रताडित बने । कोइरालाबाट प्रताडित बनेका खड्का झण्डै १२ बर्षपछि फेरी कांग्रेस राजनीतिमा शक्तिशाली बनेका छन् । १२ बर्षपछि कांग्रेसमा खड्काको खोलो फर्केको छ ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली राजनीतिमा छाइरहेका बेला खड्कामाथी भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको थियो । भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेदेखि कांग्रेस राजनीतिमा कमजोर बनेका खड्का १३ औं महाधिवेशनबाट फेरी शक्तिमा आएका छन् । भ्रष्टाचार पुष्टी भएपछि उनले झण्डै डेढ बर्ष सदरखोर डिल्लीबजारमा बन्दी जिवन पनि विताइसकेका छन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदादेखि नै सुशील कोइरालासँग उनको टकराव थियो । टकरावकै कारण सुशीलले खड्कालाई दाङबाट र खड्काले सुशीललाई बाँकेबाट चुनाव हराउन निकै ठुलो कसरत गरे । परिणाम दुवै जना पराजित पनि भएँ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि सुशील र खुमबहादुरको सम्बन्ध झन टाढियो । उनीहरु एक अर्काका कडा आलोचक बने । त्यसको संकेत १३ औ महाधिबेशनमा खड्काले आफ्नो चुनावी पोष्टरमा देखाए ।
गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालासँग सभापति पदमा पराजित भएका देउवाले समेत आफ्नो चुनावी पोष्टरमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तस्विर राखेका थिए । तर खुमबहादुर खड्काको पोष्टरमा गिरिजा, सुशील कसैको पनि तस्विर थिएन । उनले गिरिजा र सुशीलका नाममा भोट पनि मागेनन् ।
कोइराला परिवारको समर्थनमा चुनावी मैदानमा उत्रेका रामचन्द्र पौडेललाई उनले चुनाव हराउन निकै ठुलो कसरत गरे । खड्काले पौडेललाई हराउन कसरत मात्रै गरेनन्, आफ्नै प्यानलबाट चुनाव लडेका अर्जुननरसिंह केसीलाई हराउन पनि ठुलो भूमिका खेले । पार्टीमा देउवाभन्दा पछिको शक्तिशाली बन्न उनले अर्जुननरसिंह केसीलाई चुनाव हराउन भूमिका खेलेको कांग्रेसभित्र चर्चा चल्न थालेको छ । खड्काले केसीलाई मात्र होइन, कोषाध्यक्षमा चित्रलेखा यादवलाई चुनाव हराउनमा पनि निकै ठुलो भूमिका खेलेका थिए । पुष्पा भूसाललाई कोषाध्यक्ष उठाउन खोजेका खड्काले पछिल्लो समय सीतादेवी यादवलाई सहयोग गर्न मधेसी मुलका कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएको उनी निकट स्रोतले बताएको छ ।
खुल्ला केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव लडेका खडकाले पछिल्लो मत गणनामा सर्वाधिक राम्रो मत ल्याएका छन् । उनी मात्र नभई उनी निकट खुल्ला केन्द्रीय सदस्यको अवस्थामा पनि अग्रता नै छ ।
तीन सय मत गणना सकियो, प्रकाशमानको अग्रता कायमै
कांग्रेसको चुनाब :- आजको हाइटेक जमानामा पनि हिलटेक ट्यांकीमा भोट खसाल्ने !! ३००० मत गन्न ७ दिन लगाउने / प्रम चुनाब र महादिबेसनको खर्च भारत संग लिने / गगन जस्ता युवा नेतालाई पाखा लगाउने / खुम बहादुर जस्ता अदालतले भस्टचारी भनेर डामेकाले चुनाब जित्ने / ३ चोटी प्रधानमन्त्रि हुदा केहि गर्न नसकेका र सात्ता टिकाउन ४८ जना मन्त्रि बनाएका अनि मेलम्ची खानेपानिमा ठुलो भस्टचार गरेकाले ज्ञानेन्द्रले ६ महिना जेल हालेका व्यक्ति सभापति जित्ने पार्टीले देश बनाउला भनेर कल्पना गर्नु भनेको अस्ति झरेको सिंगल engine प्लेन चढेर चन्द्रमा जान्छु भनेको जस्तै हो / कहिले आउला राजनीतिक चेतना ? हामि कस्तो नया नेपाल बनाउने कल्पना गर्दैछौ ? कस्ता जन् प्रतिनिधि चुन्दैछौ / देश बनाएन भनेर नेतालाई गालि गर्ने कि देश बनाउने लाइ मात्र नेता बनाउने ? आन्तरिक समस्या ब्यबस्थापन गर्न नसक्ने पार्टीले देशको समस्या समाधान र सम्भोधन गर्न सक्छ भनेर सोच्नु ठुलो मुर्खता हुन्छ / मासु भातमा र भारुमा बिकेर भोट हालेको कि राजीनितिक चेतना नभएका कार्यकर्ताको पार्टी हो ? आम जनता र बुद्दि जीबी बर्ग जान्न चाहन्छन /
खुम बहादुर सडक बिभाग तथा यातायात मंतारालयमा मन्त्रि हुँदा अन्य झिना मसिना प्रोजेक्टमा जान चाहनेहरुलाई प्रोजेक्टको बजेट अनुशार दस्तुर लिने र दुइ अरब बराबरको फिडर रोड अन्तर्गत चार्ली इलाम,गोदावरी भतकाँडा र सिलगढी साँफे सडकमा जान चाहने प्रोजेक्ट मेनेजर देखि लिएर इन्जिनियर,ओभरसियर लेखा अधिकृत संग बीस करोड रुपैयाँ अशुलेका थिए !एक प्रोजेक्ट मेनेजर बाट पांच करोड,प्रत्येक साइट इन्जिनियर बाट दुइ करोड.ओभरसियर बाट पचहत्तर लाख र लेख अधिकृत बाट पचास लाख अशुलेका थिए!माथि उल्लेखित दस्तुर नबुझाए सम्म एडीबी र वोर्ल्ड बैंकको रकम अनुशर चल्ने कुनै पनि प्रोजेक्टमा भ्रष्ट प्राविधिकहरु जानु सम्भव थिएन !यातायात मन्त्रालयमा खुम बदह्दुरको अवशान पछि बिजय गच्छेद्दारको आवागमन भयो!बिजय गच्छेद्दारले पनि प्र्तात्येक प्रोजेक्ट मेनेजर र इन्जिनियर ओभरसियर र लेखा अधिकृत बाट राम्रै दस्तुर उठाएर गिरिजालाई चढाएका थिए !
A perfect comment for our disgusting politics from the side of Min bdr Pandit jyu.
विपक्ष दलसँग संवाद नगर्ने सत्तारुढ दलको निर्णयप्रति बावुरामको आपत्ती
मेरा चासो सरकार परिवर्तन होइन, कालोबजारी नियन्त्रणमा छ : देउवा
संविधानसभामा फराइए १५० राष्टिय झण्डा, बेहुलीझै सिंगारियो(फोटो फिचर)